Sepsis nezinsana - kuyini?
Neonatal sepsis (sepsis olusanda kuzalwa) - isifo libhekene bacteremia, okungukuthi, umthombo ukutheleleka kusuka nezilwanyana ezincane ufake ngokuqondile egazini. ukutheleleka osanda kuzalwa kungavuka izinkathi ezahlukene zokukhulelwa noma ngemuva kokubeletha. Izinsana ezizalwa ngaphambi kwesikhathi Lesi sifo siphatha kakhulu yilesi sifo. Sepsis e izinsana - ngokuvamile ngempela isifo okubikekayo ubelokhu iminyaka eminingi, lokhu zokugula elinesimo iphesenti eliphezulu nokufa (kusuka 15 kuya 50%). Kufanele kuqashelwe ukuthi isifo kungenzeka ngenxa isenzo kokubili Amagciwane abangela izifo futhi ezingosomathuba (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus, Escherichia futhi Pseudomonas aeruginosa , njll) nezilwanyana ezincane ku umzimba womuntu.
Sepsis Newborn: omsakazo
Kanjani ukutheleleka wosana? izici ezibangela babe phakathi nenkathi ende esomile, isikhumba abalimala umntwana osanda kuzalwa, futhi khona ubovu nezinqubo ukuvuvukala emzimbeni kamama. Ngemva enxebeni igazi izitsha enkabeni, kanye ngokusebenzisa nolwelwesi lwamafinyila amagciwane zokuphefumula kanye emathunjini bese amagciwane kalula kakhulu ukungena emzimbeni. Uma sepsis ezinganeni eba utero, amasango kwezifo kusho emzimbeni kamama (ngokuvamile ngo-placenta).
sepsis ezisanda kubelethwa: kuwukubonakaliswa sifo
Uma ucabangela pathogenesis lesi sifo ke kubonakala ngesimo ekuseni, sekwephuzile futhi sepsis nosocomial. iwashi Ekucaleni kwemalanga lokuqala zokuphila, ngokuvamile ukutheleleka kwenzeka utero. Amagciwane angena emzimbeni umbungu ngokusebenzisa placenta. Futhi ingane ukutheleleka singenzeka ngesikhathi ukudlula ingane lokuzalwa umsele. sepsis Late Kutholwe emavikini ekucala 2-3 yentuthuko post-embryonic kwesikhathi ingane. Imbangela yale isifo kulokhu microflora lwesitho sangasese sowesifazane kamama. sepsis Nosocomial ezisanda kubelethwa kubangelwa microflora pathogenic, okuyinto ekhona izibhedlela kanye nezikhungo zezokwelapha. Ivame ukutholakala okubangelwa staphylococci, isikhunta igremu-negative bacilli. Transmission ukutheleleka kungenzeka ngokusebenzisa lokuzalwa canal kamama, ezandleni nabezokwelapha, imishini, amathuluzi kanye izinto ukunakekelwa. uhlelo Newborn sokuzivikela ibuthakathaka kakhulu futhi awukwazi ukumelana isenzo pathogenic alawa magciwane.
Ingane enqaba ebeleni, has iphango kwehle, regurgitation njalo. Futhi, izinga lokushisa emzimbeni labashone sepsis (pyrexia), cyanosis waphawula unxantathu Nasolabial, isilonda esibi ephulukisa enkabeni. Phakathi nale nkathi, kungcono ukunikeza ingane nenye, equkethe acidosis acid amagciwane. Sepsis kubonakala njengoba septicemia noma septicopyemia. Esimweni sokuqala, ukudakwa umzimba zenzeka ngaphandle foci wawubona ukuthelelana yesibili evelele ukuvuvukala foci (isib cellulitis, abscesses, meningitis, inyumoniya, osteomyelitis). Izingane nge lesi sifo ngokushesha esibhedlela futhi ebekiwe imithi elwa namagciwane nge spectrum ezibanzi yesenzo (Ampioks, ampicillin, lincomycin, Gentamicin, Tobramycin, Tseporin). Ngaphambi aphoyintimenti yokwelapha ngemithi elwa namagciwane kuyadingeka ukunquma nozwela nezilwanyana ezincane ukuze lezi zimali. Imithi elwa namagciwane ingasatshenziswa intramuscularly, noma ngemithambo yegazi. Ukubuyisela amanzi kanye electrolyte umzimba emzimbeni esimisiwe izixazululo zikashukela-nosawoti ne-amino acid, okuyinto singasetshenziswa enterally futhi parenterally. Ukuze ukubuyisela amasosha omzimba iqondiswa izidakamizwa immunomodulating: Thymosin, T-activin, prodigiozan, pentoxy, Dibazol.